ⓘ ခါဇုယို ဆယ်ဂျီမ
ခါဇုယို ဆယ်ဂျီမ မှာ ၁၉၅၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ဖွား ဂျပန်ဗိသုကာပညာရှင်ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် သန့်ရှင်းသော မော်ဒန်ဒြပ်စများဖြစ်သည့် ဖန်, စကျင်ကျောက်များနှင့်သတ္တုကို လုပ်ထားသည့် စင်ကြယ်တောက်ပမျက်နှာပြင်များဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ဒီဇိုင်းများအတွက်လူသိများသည်။ လေးထောင့်နှင့် ကုဗတုံးများကို အသုံးပြုသကဲ့သို့ အမျိုးမျိုးသောဒီဂရီများ အသုံးချမှုကို သူမ၏ဒီဇိုင်းများတွင် တွေ့နိုင်ပါသည် ။ အကြီးစားပြတင်းပေါက်မှ သဘာဝအလင်းကို နေရာလပ်အတွင်းဝင်ရောက်အောင် အသုံးချပြီး အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်းအကြား အရည်အကူးအပြောင်းကဲ့သို့ ချောမွေ့သောစီးဆင်းဖြတ်သန်းမှုရသဖြစ်အောင် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒီကြားခံနယ်နှစ်ခုစပ်ဆက်မှုသည်လည်း သူမရဲ့ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုကို လှုံ့ဆော်ကွန်းမြူးပေးသည်။
Ryue Nishizawa နှင့်အတူ ဂျာမနီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ ပြင်သစ်၊ အင်္ဂလန်၊ နယ်သာလန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် စပိန်နိုင်ငံတွင် စီမံကိန်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းအများစုကို နယူးယောက်မြို့ရှိ Bowery ခရိုင်အတွင်းက EPK ပြတိုက်သစ်ရဲ့ Rolex သင်ယူရေးစင်တာမှာ လေ့လာနိုင်သည်။ Toledo အနုပညာပြတိုက်အတွက် အရိပ်ခို နားနေနိုင်ရန် ဖန်အဆောက်အအုံကို ဗိသုကာကမ္ဘာကြီးနှင့် ဖန်နှင့်ဆက်စပ်သောအနုပညာကို အများပြည်သူသုံးနေရာလပ်တို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ကြောင်း ပြသဖန်တီးခဲ့သည်။ ထိုသို့သောဒီဇိုင်းအခြေခံသဘောတရားများကို သူရဲ့ဒီဇိုင်းများတွင် ဖောဖောသီသီတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Ryue Nishizawa နှင့်အတူပူးတွဲကာ Pritzker Prize ကိုလက်ခံရယူသူ ဒုတိယမြောက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။
သူမကို Sejima Ibaraki စီရင်စု၊ ဂျပန်ပြည်တွင် ၁၉၅၆ အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာဗိသုကာမာစတာဘွဲ့ကို ဂျပန်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ်မှ ရပြီးနောက် Toyo Ito and Associates တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Toyo Ito တွင် အလုပ်သင်လုပ်ပြီးနောက် ၁၉၈၇ခုနှစ်တွင် Kazuyo Sejima & Associates ကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ သူမပထမဆုံးငှားရမ်းသူမှာ Toyo Ito and Associates မှ သူမနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သူ Ryue Nishizawa ဖြစ်သည်။နှစ်ပေါင်းများစွာ သူမထံအလုပ်လုပ်ပြီးနောက် သူ့ကို သူမနှင့် လက်တွဲဖက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်နှစ်ခုတိုကျိုအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သည့် SANAASejima and Nishizawa and Associates ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပြတိုက်မှူးအဖြစ် သူမတာဝန်ယူထားသော ၁၂ နှစ်ပတ်လည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗိသုကာပြပွဲတွင် ဗိသုကာကဏ္ဍ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် ခန့်အပ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသည် ထိုရာထူးအတွက် ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်ခံရသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Ryue Nishizawa နှင့်တကွ Pritzker Prize ဆုကို ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။
သူမရဲ့အလုပ်ကြည့်ရှုသူမှာ သူမ၏အလုပ်အားလုံးအတွက် ဖန်သားအသုံးပြုသည်ကို အများအားဖြင့် သတိပြုမိမှာ ဖြစ်ပါသည်။ သူမသည် မျက်စိကျလောက်အောင် ပြရုပ်ကောင်းသည့် စကျင်ကျောက်မျက်နှာပြင်များကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်။ သူမ၏အဆောက်အဦးများတွင် အဓိကအားဖြင့် အဆောက်အဦးမျာအတွင်း မျဉ်းကွေးများဖြင့် စီစဉ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ မှန်နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖန်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပြင်ပကိုကြည့်ရန် အခွင့်အရေးပေးသည့်အပြင် အဆောက်အအုံအတွင်းပိုင်းအပေါ်ထင်ဟပ်နေမှုများကိုလည်း ခံစားနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသည်။
သူမသည် အဖြစ်မှန်အစား အထင်အမြင်ယူဆချက်အပေါ်အခြေခံထားသည့် ရှေးရိုးကျအိုးအိမ်ပုံစံများကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ပယ်ဖျက်သည်။ သူမရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များတွင် မိသားစုငယ်အတွက်သင့်လျော်သောလူနေမှုအခြေအနေကို သရုပ်ဖော်နိုင်သော အိုးအိမ်ပုံစံတို့ပါဝင်သည်။ သူမရဲ့စိတ်ကူးမှာ အစဉ်အလာတစ်ခုကို အလုံးစုံငြင်းပယ်မှုမဟုတ်ဘဲ ဒီဇိုင်းများ၏သမားရိုးကျဖြစ်စဉ်ကို စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ သူမသည် ခန့်မှန်းယူဆချက်များဖြင့် ဒီဇိုင်းကို တည်ဆောက်မှုအစား သတိရှိရှိဖြင့် ဒီဇိုင်းကို ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ ကြိုးစားသည်။ သူမသည် စိတ်ကူးယဉ်အယူအဆ သို့မဟုတ် သီအိုရီပေါ်တွင်အခြေခံကာ အဆောက်အဦးတည်ဆောက်မှုအား မဖြစ်နိုင်ဘူးဟု ထင်မှတ်၏။
4. ပါမောက္ခအဖြစ် သင်ကြားခြင်း
သူမသည် Tama အနုပညာတက္ကသိုလ်နှင့်တိုကျိုဂျပန်အမျိုးသမီးတက္ကသိုလ် တို့တွင် ဧည့်ပါမောက္ခအဖြစ် သင်ကြားပေးတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် တွင် Nishizawa သည် သူမနှင့်အတူ အကြံပေးကောင်စီအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် Polytechnique de Lausanne နှင့် Keio University တွင် သင်ပြသွန်သင်ပေးသည်။
5. Projects by Kazuyo Sejima and Associates
Nasumoahara Harmony Hall Not built/project only – 1991 – Tochigi, Japan
Platform III House Not built/project only – 1989 to 1990 – Tokyo, Japan
Service Center at the Tokyo Expo 96 Not built/project only – 1994 to 1995 – Tokyo, Japan
Yokohama International Port Terminal Not built/project only – 1994 – Kanagawa, Japan
An Apartment Building Not built/project only – 1991 – Osaka, Japan
Saishunkan Seiyaku Womens Dormitory – 1990 to 1991 – Kumamoto, Japan
6. Honors and recognition
1995 - Kenneth F. Brown Asia Pacific Culture and Architecture Award, University of Hawaii for Saishunkan Seiyaku Women’s Dormitory
1989 - Yoshioka Prize, The Japan Architect for Platform I
1992 - Young Architect of the Year, Japan Institute of Architects for Saishunkan Seiyaku Women’s Dormitory
2006 - Japan Architecture Award for House in Plum Grove
1994 - Grand Prize, Commercial Space Design Award ’94 for Pachinko Parlor I, Pachino Parlor II
1988 - Kashima Prize, SD Review 1988 for Platform I, Platform II
2006 – Prize of Architectural Institute of Japan, Tokyo, Japan for 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
1998 – Prize of Architectural Institute of Japan, Tokyo, Japan
2005 – 46th Mainichi Newspapers Arts Award, Architecture Category for 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa
2007 – Kunstpreis Berlin Art Prize, Berlin, Germany
2007 – Premio Mario Pani 2007 Mario Pani Award, Mexico City, Mexico
Wikipedia: ခါဇုယို ဆယ်ဂျီမ